GEED DAHAB AH "OLA": SHARAXAAD, BEERAN IYO DARYEEL, SAWIR - GEED GEEDEEDKA
Caadi ahaan, noocyo kala duwan oo dhirta qalaad ayaa loo isticmaalaa naqshada muuqaalka. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aan la raali ka ahayn, masters-ka naqshadeeynta goobta waxay isticmaalaan dhaqankooda aqoonta u leh cirqiga, marka laga reebo laga yaabo in waxoogaa wax laga beddelo. Goob gaar ah oo iyaga ka mid ah waxaa degsan geedo tufaax ah oo qurxoon. Noocyada noocyada kala duwan ee maanta waxay bixiyaan baaxad dhab ah ee hal-abuurka. Miro geed oo yaryar "Ola" waxay noqon kartaa qurxinta ugu fiican ee wax lagu soo koobi karo.
Aan ka hadalno faahfaahin dheeraad ah.
Geedkan caleenta ah ayaa gashay gobolka Poland. In dhererka ma aha in ka badan 5 m, taajajinta wareega wareega wareega wuxuu ku saabsan yahay dhexroorka isku mid ah (si kastaba ha ahaatee, waxaa laga dhigi karaa ikhtiyaarkaaga). Caleemaha geedka tufaaxa waa runtii rabshado dhab ah. Kalluunka guga, waxay leeyihiin midab qurux badan oo shukulaatada caanaha ah, xagaaga waxay helayaan midab cagaaran oo dhalaalaya, lagu rido dahab, xilliga dayrta waxay noqdaan huruud ama bunni. Inta lagu jiro xilliga ubax, "Ola" waxaa gebi ahaanba daboolay ubaxyo casaan ah oo madow, oo ka soo baxaya caraf udgoon, iyo xilliga dayrta waxaa sidoo kale lagu qurxiyaa yar yar, ilaa 3 cm dhexroor, tufaax casaan ah oo aan hoos u dhicin ilaa jiilaalka.
Ma taqaanaa? "Hola" oo ah "Ola") ee Spain ayaa ah mid fudud oo xasilooni saaxiibtinimo leh, laakiin luqada Polish-ka "ho-la" waxaa loo tarjumi karaa "wow!", "Wow!", "Ah-ah-ah" . Kama doodi doonno magaca dhabta ah ee tufaaxa ornamental, laakiin waa ku fiicantahay in laga fekero in tani ay tahay wax aad u fiican oo wanaagsan, sida geedka laftiisa.
"Ola" waxaa laga yaabaa in laga yaabo in "Ola" laga yaabo inuu yahay geedkii ugu quruxda badan ee lagu qurxiyo ee loo yaqaan 'date of tufan', oo aan macquul aheyn in la yidhaahdo goorta geedku ka wanaagsan yahay - marka uu ubaxayo ama marka uu midho dhasho. Labadaba hal mar iyo wakhti kale, quruxda geedka tufaaxan ayaa si fudud u sharaxan.
Shaqada ugu weyn ee tufaaxa "Ola" waa, dabcan, qurxinta goobta. Si kastaba ha ahaatee, geedkan waa mid aad u qurux badan laftiisa, si kastaba ha ahaatee, aqoon iyo xirfad gaar ah oo ku saabsan qaabeynta naqshadda muuqaalka, waxa kale oo suurtagal ah in la abuuro noocyo kala duwan oo kala duwan oo ka qaybgalkooda.
Waa muhiim! Dhirta tufaaxa ah waxaa badanaa loo isticmaalaa naqshad dhuleed si ay u siiso goobta qaabka Japan. Marka la eego naqshadeynta, raaxaysiga iyo urta "Ola" oo loo qaybiyey inta lagu jiro ubax, ma aha mid ka liidata Japanese caadiga ah sakura, taas oo, nasiib daro, ma aha had iyo jeer qaato xidid xaaladaha aan caadi ahayn, halka tufaaxa duurjoogta ah gebi ahaanba aan qabyo ahayn.
"Dhirta Apple ee Bloom - mucjiso." Khadkaan ka socda heesida heersare ah oo uu ku sameeyay E. Martynov isagoo tixraacaya "Ola" waxaa lagu dhufan karaa marar badan. Xitaa halabuurka ugu nasiib darrada leh dhirta tufaaxa ee tufaaxa noocan ah waxay u noqotaa mid la isku qurxiyo iyo mid tayo leh. Haddii uu jiro kaydka u dhow geedka, ee iftiinka uu laamaha ku daboolay midabka dhalaalaya oo la arki karo, sawirka noocan oo kale ah qof deggan xagaaga ayaa sameeyn doona farshaxan ama gabay. Geedka qurxinta laysku qurxiyo wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican marka loo eego cadarka, isaga oo la barbardhigaya midabada dhalaalaya cirbadaha jilicsan iyo cirbadaha. Geedka tufaaxa ee wanaagsan wuxuu sidoo kale u eegaa qaybta hore ee dayrka ama agagaarka duurka. Waxaa lagu beeran karaa geedo kale oo miro ah ama duurka miro ah oo lagu sameeyay habka ay ufilan tahay si markaa qaab-dhismeedku u helo qaab dhammeystiran oo casri ah.
Haddii aad ku taal boggaaga waxaa jira gees u dhigma cawska cagaaran, sida cagaarka dhirta lagu nadiifinayo ayaa si weyn u eegi doona. Doorasho kale waa in la dhigo bartamaha sariirta ubax ee tulooyinka, daffodils, peonies iyo ubaxyo kale oo guga. Xitaa xayawaanka raaxada leh ayaa ka faa'iideysan doona xaafadahan.
Si aad u qurxiyo bogga leh ubaxyo qurux badan, xitaa geedo badan ayaa la beeray - Sakura, delonix, wisteria, rododendrons, dhoobo, magnolias, lilacs, pyranths, jacaranda.
Intaa waxaa dheer, naqshadeeyayaasha waxay jecel yihiin in ay isticmaalaan geedo tufaax ah oo qurxiyo sida dabbaal. Waxaa si fiican u soo baxaya jarida iyo samaynta taajka, geedaha sida kali ah ama wada jirka ah ee geedaha kale ee soo gala waa wax aad u fiican oo lagu ogaanayo fikradda hal abuurka.
Waxyaabaha la abuuri karo waxaa lagu hagaajin karaa shuruudaha kala duwan - koritaanka, waqtiga ubaxa iyo fruiting, midabaynta, iwm. Aqoonsiga sifooyinka dhirta oo dhan loo isticmaalo naqshadeynta, waa suurtogal in la gaaro in xilliga xagaaga hal sawir oo sarraysa lagu beddeli doono mid kale, iyo midab leh.
By habka, haddii aadan haysan dhulkiinna, ha quusin! Waxaad dhali kartaa geed dufan qurxin ah oo daaqadahaaga ku yaal, oo ku yaala barxadda guryaha dhismaha, midna deriskaasi si cad uma sheegi doono raali gelin, taas oo ah mid liddi ku ah.
Waxaa xiiso leh, "Ola" xitaa xilliga jiilaalka ma luminayaan racfaanka. Tufaaxa cawska ah, oo ku yaal geedka, wuxuu ku daboolaa aagga soo ifbaxa leh dhibco casaan ah, oo wali soo jiidanayo nooca appetizing ee shimbiraha, kuwaas oo maalmaha qaboobaha ah oo kaliya uun ku faraxsan. Waxaa la daboolaa dhaxan, mirahaas waxay abuuraan jawi aad u fiican oo nabad ah, xasilooni iyo nabad.
Laakiin ma aha oo kaliya ee quruxda badan ee geedkan shaqo furan yar ayuu u adeegaa.
Waa muhiim! Khubarada waxay kugula talinayaan in aad marwalba ugu yaraan hal geedka tufaaxa ah ku qoran goobta, iyo tani ma aha oo kaliya tiyaatarka. Xaqiiqdu waxay tahay in dhirta noocan oo kale ah ay ugu wacan tahay carada ugu xoogan inta lagu jiro ubax soo jiitamaya tiro badan oo cayayaanka ah goobta iyo sidaas darteed si weyn u hagaajin doona pollination of geedo kale oo miro. Yurub, joogitaanka dufan (ornamental) tufaax ah oo ku dhex jira geedo miraha lagu beeray waa qalab guud ahaan la aqbalay.
Ka hor intaan la beeriin tufaax qurxoon, gaar ahaan meelaha yaryar, milkiilayaashu waxay leeyihiin su "aal macquul ah: miyuu midabkiisa la cuni karaa? Dareenka noocan oo kale ah waa sahlan tahay in la fahmo, sababtoo ah lix boqol oo mitir oo labajibbaaran oo jidad kasta ah ayaa ku yaal mitir kasta, laba jibbaaranna, oo marka lagu daro quruxda, waxaan rabaa inaan ka helno faa'iidooyin waxtar leh oo ka socda dhulka.
Marka la eego "Ola" - waa hab weyn oo lagu macaamilo ganacsiyada. Dabcan, marka la eego dhadhanka, miraha midkoodna lama barbardhigi karo noocyo tufaax ah oo khudradda sare ah, si kastaba ha ahaatee, foomka wax lagu naqshadeeyey, tufaaxa jannooyinka ayaa ku farxi doona.
Ma taqaanaa? Tufaaxa caleemaha waxaa lagu magacaabaa miraha yaryar ee geedaha tufaaxa ee ornamental. Halyeeyada badan, khuraafaadka, ereyada iyo calaamadaha ayaa la xiriira geedkan. Qayb ka mid ah waxa ay ku xiran tahay qaabka miro, sababtoo ah kubaddu waa calaamad muujinaysa in la dhameeyo. Mid ka mid ah sifooyinka awoodda kalsoonida ee Boqortooyada waxaa lagu magacaabaa "awood", ama "tufaax awood leh", taas oo macnaheedu yahay in milkiiluhu uu adduunka oo dhan gacanta ku hayo. Isla mar ahaantaana, gobolka wuxuu calaamad u yahay nabadda, halka ay ushaqeeyso dagaalku.
By habka, tani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka kala duwan. Miraha, inkastoo yar, waxay ka weyn tahay tan ugu badan ee geedaha tufaaxa badan oo runtii dhadhan aad u wacan.
Xulashada geedo marka aad iibsaneyso
Nasiib darro, khiyaamo ku iibinta abuurka iyo geedo maanta waa wax caadi ah. Marka loo eego macluumaadka qaar, illaa ¾ ee waxa laga iibiyo internetka waa been abuur. Laakiin haddii aad soo iibsatay abuur ah ee yaanyada jaalaha ah jaalaha ah, iyo yaanyada lahayn beerta beerta wadajir ah "beeraha midho dhalaalaya" koray - tani waa kala bar dhibka. Goynta, go aaminta iyo sanadka soo socda waxaad noqon doontaa taxadar badan.
Dhibaato, marka loo eego caleemaha qiimaha leh, miro, ama, kiiskeena, geedo qurxoon, waa dhul la yaqaan. Qalad noocan oo kale ah markiiba lama helin, waqtigan aad horey u soo qaadatay qadar fara badan oo ah foosha iyo jacaylka geedka, waxa uu billaabay, in uu booskiisa ku qaato, oo uu soo baxo in aysan taasi ahayn waxa aad raadineysay. Geeduhu waxay ku nool yihiin waqti aad u dheer, mararka qaarkoodna dadku way ka badan yihiin, sidaas darteed doorashada ah ee seedling waa in loo soo dhawaadaa dhammaan masuuliyada: inta badan, waxaad ku beeri kartaa hal mar iyo inta ka dhiman noloshaada (ugu yaraan, adiga kuu gaar ah).
Ma taqaanaa? Apple - ereyga Ingiriisiga ee apple wuxuu ka yimid magaca Apollo, maxaa yeelay Giriigga Giriigga ah wuxuu ahaa geedkii xayawaaniga ahaa ee loogu talagalay ilaahii hore ee Giriigga ee qorraxda iyo xigmadda. Waayeelka la xidhiidha tufaaxa, siday u kala horreeyaan, aqoonta iyo qorraxda, iyo dabeecaddan dambe ee dhinaca miraha oo keliya xoog loo yeesho, sababtoo ah alkhimistayaasha waxay arkeen xiddig shan farood ah, pentagram, qaybta tufaaxa.
Sidaa darteed, ha aheyn in la xiiro marka aad dooranaysid sapo, waa inaad raacdaa xeerar dhowr ah.
Marka hore. Hubso in "Ola" uu ku habboon yahay jawigaaga. Maaddaama kala duwanaanta noocaas ah laga helay Yurub, ma ahayn markii hore loogu talagalay garoomada sida daran, kuwaas oo ah, tusaale ahaan, gobollada qaarkood ee Ruushka. Maanta, si ay ugu fududaato beeralayda, adduunku wuxuu u qaybsan yahay dhawr goobood oo caabuq ah, oo ka duwan midba midka kale marka la eego heerkulka ugu hooseeya ee sanadlaha ah isla markaana loo isticmaalo si sax ah si loo go'aamiyo xaaladaha ugu wanaagsan ee sii kordhaya ee dalagyada kala duwan (badi ornamental iyo miro daaqsin).
Waa muhiim! Apple "Ola" waxaa loola jeedaa aagga shanaad ee caabuqa barafka. Si fudud loo dhigo, tani waxay ka dhigan tahay in ay kori karto oo horumarin karto sida caadiga ah gobollada oo qiimaha ugu sarreeya ee heerkulbeegga xilliga qaboobaha uusan hoos u dhicin -28 ° C. Haddii ay ku yartahay gobolkaaga, oo aanad isku celcelin, laakiin ugu yaraan mararka qaarkood, xitaa haddii aanad sanad walba ahayn, waxaa fiican inaadan halis gelin jilitaankaaga goobtaaga sida "Ola". Tilmaameeyaha heerkulka kor ku xusan ee tufaaxan waa nooca "point of no no celin".
Tusaale ahaan: qaybta waqooyi galbeed ee Ruushka waxay ku taallaa saldhigga afaraad ee caabiga barafka, Ola maaha mid ku habboon dhulkan, laakiin dhulka Ukraine oo dhan waa shanaad, lixaad iyo toddobaad, taas oo ah, waxaad dhali kartaa geedka tufaaxa ee gobol kasta.
Midka labaad. Ha ka iibsanin sapling from gacmaha dadka aan la garan karin. Isticmaal adeegyada dukaamada khaaska ah. Xitaa haddii aad ku kalsoon tahay ganacsiga internetka, markaad alaab ka iibsato ka hor intaanad dhamaystirin iibka, si taxadar leh u tixgeliso geedaha yar yar. Waa inay lahaataa muuqaal cusub, iyada oo aan lahayn wax calaamado ah oo isdilaya iyo qalajinta. Jirrada, luqunta, qoryaha iyo caleemaha waa nadiif ah oo adag, aan lahayn cudur ama soo-gaadhsiinta cayayaanka. Jiritaanka dhibaatooyinka waxaa lagu muujiyaa dhibco caleemaha, qoryaha qalalan, dildilaaca, waxyeellada jilifka ama farsameynta, necrosis, lakulanka, dhibco madow iyo, gaar ahaan, caaryar meel kasta oo ka mid ah seedling. Meelaha tallaalka waa in si fiican loo eego, sidoo kale, waa inaad hubisaa in qaybta sare ee seedlingka leh dhirta iyo waraaqaha dhabta ahi ay tahay masiibo (marmarka qaarkood waxay dhacdaa marka loo eego qoob ka mid ah dhalashada farsamada, dhaliyaha sheyga oo iibiya duur dabacsan kadib tallaal aan ku guuldareysneyn) Iska ilaali, si taxadar leh u barbardhig muuqaalka kaynta ama caleemaha deriska ayaa laguu siiyay deriskaaga noocyo kala duwan).
Noocyada caanka ah ee geedaha tufaaxa qurxinta waa Rudolph, Royalty, Nezvetsky.
Saddexaad. Dhamaadka macluumaadka dhamaystiran oo ku saabsan badeecada iyo soo saaraha waa in lagu dhajiyaa shinnida: noocyada, beerashada, beeraha, iibiyaha. Haddii aysan jirin wax macluumaad ah, marka hore ma jiri doonto mid cabasho kuu ah, taas oo macnaheedu yahay inaad iska iibiso. Sida ugu wanaagsan ee loo iibsado waa meesha lagu xanaaneeyo, waxaa jiri kara suurtagalnimada helitaanka been abuur ah oo eber ah, iyo helitaanka "dhammaadka" haddii lagu khiyaaneeyo aad u sahlan tahay: sida ururku uma maleeynayo in uu meel uun ku dhoco.
Tixgelin kale: haddii xannaanadu ku dhexjirto gobolkaaga oo iibiso geedka tufaaxa ee noocyada kala duwan, waxa loola jeedaa in ay ku habboon tahay jawigaaga, sidoo kale, markii hore waxaa lagu koray. Iibsiga shinnida laga soo saaro wax soo saarka maxaliga ah waa dammaanad dheeraad ah oo ku saabsan koritaanka geedo guuleysta. Afaraad Geedo lagu iibiyo miyirka dhulka hoostiisa ayaa ah, dabcan, u fiican geed, diiqad yar oo ka yimaada transplanting. Si kastaba ha noqotee, in dalal badan oo ka mid ah shirkadaha aan walbahaarku isku dayin inay isku khilaafaan dhibaatooyinka nidaamka xididka. Xirmooyinka furan waa inay ahaadaan kuwo isdaba-joog ah, haddii kale sharafta wax soo saaraha iyo xirfad-yaqaanka ma keeni karo kalsooni. Geedo caafimaad leh ayaa leh xididdo dhalaalaya, wadna waa iftiin la mid ah (ha ahaato caajis si aad u hubiso jarista). On xididada waxaa jiri kara dhibco, koritaanka iyo calaamadaha kale ee cudurka.
Waa muhiim! Kobaca nodular ee xididada - astaamaha kansarka xididka!
Xubinta aasaasiga ah ee geedka tufaaxa ah waa inay lahaataa ugu yaraan 3 laamood oo qiyaastii 30 cm dheer ah, waa mid aad u muhiim ah in xididka furan uu si fiican u buuxsamo: daboolo wax si fiican u nuugo qoyaanka. Tani waa shuruudaha caadiga ah; haddii aan la buuxin, markaas inta kale ee iibiyuhu ku kalsoonaan maayo. Si kastaba ha noqotee, haddii aad iibsato adigoo isticmaalaya internetka, ama dhoofka ayaa laga soo saaraa meel fog, ama aanad doonaynin inaad isla markiiba beerato - geed oo leh xidido furan ayaan kuu shaqeyn doonin. By habka, waxaa sidoo kale ka fiican si aad u iibsato sapling leh caleemo, sababtoo ah iyada oo iyaga oo geedo yar yar lumiyo qoyaan, dhoobo si degdeg ah oo markaas qaadataa xidid aad u adag. Kalluumeysatada is-ixtiraameysa waxay caleemo qashin ka sameysaa ka hor inta aan la iibin, iyada oo aan waxyeelleynin asliga ah. Haddii aad doonayso inaad gasho geed geedka guga, ka iibso seedling leh burooyinkeeda oo aan la furin.
Waa muhiim! Marka aad iibsanayso seedling leh xididada furan, isla markiiba ku duub bac si aad u yar oo biyo ah. Dhirta geedkan sida ugu dhakhsaha badan waa inay ahaato sida ugu dhakhsaha badan. Xilliga kaydinta ugu badan ee la oggol yahay waa 10 maalmood xaaladaha qaboobaha (illaa 10 ° C), laakiin ma ogaan kartid inta jeer ee marxaladdan ay dhaaftay tan iyo geedkii dhulka laga qoday.
Haddii seedlingka lagu iibiyo xididada xidhan, xoogga xididada ayaa sidoo kale la baari karaa. Hubi in buruqda dhulku ku filan tahay "caan" (calaamad wanaagsan) waa jiritaanka maqaarka dusha sare), iyo seedling kama soo baxaan dhulka ama ka soo baxa weelka uu ku yaal. Tan shanaad. Waxaa ugu wanaagsan in la iibsado hal sano, ugu yaraan laba-sano oo ah sapling, oo aan ka weyneyn, sababtoo ah yaryar geedka, waxay u sahlan tahay inay adkeyso walbahaarka culus ee la xiriira transplanting. Sida dhererka dhirta "geedaha isku midka ah" waa in yar oo ka badan 1 m (oo lagu daray 20-30 cm), "laba-jir" - qiyaastii 1.5 m Haddii geedku yaryahay, taasi waxay ka dhigan tahay in xaaladaha habboon ee aan la bixin karin oo aadan iibsan.
Joogitaanka taajka ah ee sapling sanadle ah waa caadi, laakiin warshad ka weyn waa in hore u leeyihiin sprouts si toos ah loogu tilmaamo dhammaan jihooyinka. Da'da geed ayaa si fudud loo go'aamiyaa qulqulka dabeecadda ee jilicsan, waxaa la sameeyaa sanadkiiba.
Seddexaad. Mar walba soo iibso geedo ka hor intaan la beeriin, marna samee tan horay, sababtoo ah kaydinta geedaha yar yar waxay u baahan tahay xaalado gaar ah mana socon karo muddo dheer. Qalad kale - helitaanka geedaha yar yar ee bannaanka hore, dhammaadka jiilaalka ama horraanta gu'ga. Inta lagu jiro muddadan, wax laga beerto gobollada koonfureed, si liidata loogu talagalay jawi aad u daran, ayaa lagu tuuraa suuqa.
Mar labaad: doorashada ugu fiican waa xannaanada maxalliga ah, meesha aad naftaada (ama adoo caawimaad u leh takhasus) ayaa dooran doona geed dhadhankaaga, ka dibna waxaa laguu qodxi doonaa dhulka hoose ee horteeda.
Geedo geedo ah ee tufaaxa ornamental
Geedka iyo xanaaneynta dhirtii geedeedka Ola waa, iyadoo ay weheliyaan, sida midda geedaha tufaaxa ee caadiga ah; sidoo kale, si ka duwan kii dambe, geedkii ornamental wuu cafin karaa qaladaad ka mid ah beerta aan duudduub lahayn. Laakiin si ay si dhab ah u farxaan indhaha sanadaha, waxa fiican in la sameeyo wax kasta oo markiiba "sida ay sayniska".
Tani noocyo kala duwan oo tufaaxa qurxoon wuxuu dalbanayaa dalab aad u sareeya oo ku saabsan ciidda. Dhulku waa inuu ahaadaa mid aad u bacrin ah, iftiin (waa fiicantahay in laga gudbo hawo) iyo nadiifin. Isla mar ahaantaana, geedku uma dulqaadanayo joojinta biyaha oo dhan, sidaa daraadeed, biyaha dhulka hoostiisa ah waa inaysan ku dhaafin meel ku dhow, ama biyaha waa in la diyaariyaa ka hor inta aan la beeri.
Masaafada ugu wanaagsan ee geedaha kale waa inay ahaataa ugu yaraan 4-5 mitir.
Markaad dooranayso geed geed dabacsan, waxa kale oo lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in laga yaabo in uu dareemo wanaag fiican ee penumbra, si kastaba ha noqotee, si gaar ah quruxbadan oo qurux badan u ah meelaha qorraxdu ka baxdo, iyo hooska ma jecla. Maaddaama ay tahay ubaxa quruxda badan ee "Ola" oo la qiimeeyo oo dhan, xulashada saxda ah ee geedkan oo kale waa muhiim.
Caadiyan, dhirta beerta waxaa lagu beeray guga hore, ilaa ay burooyinkoodii ubaxu soo baxaan, ama bartamihii-deyrta, ka dib markii dhirta ay hoos u dhigeen caleenta. Waxaa la aaminsan yahay in haddii sapling lagu koray weel, waxaa lagu beeray karaa iyadoo la isticmaalayo habka marin-u-qaadista ee dhul furan waqti kasta xilliga guga, dayrta ama xagaaga.
Si kastaba ha ahaatee, khubarada waxay ku talinayaan in ay weli doorbidaan beeritaanka dayrta ee geedaha tufaaxa, iyo halkan sababta.
Guga, marka dabeecadu timaaddo nolosha, koritaanka degdegga ah ee qaybaha anteenada ee geedaha ayaa billaabanaya: burooyinkeeda Bloom, caleemaha iyo ubax u muuqdaan, caleemo cusub ayaa la sameeyay. Nidaamka asaasiga ah, oo aan weli la xoojin, ayaa si fudud u awoodi kari waayay inuu "quudhsanayo nolosha" isla markaana isla markaaba is daryeesho, taas oo ah, in la bixiyo, si loola hadlo, aasaas.
Natiijo ahaan, badanaa waxay dhacdaa in geedka la beeray guga ay u muuqatay in si quruxsan loo qabsaday, xagaaga oo dhan ayaa ku faraxsanaa inaad laamo yar yar iyo caleenta, xilliga dayrta, sida caadiga ah, caleemuhu waxay noqdeen huruud iyo hoos u dhacaan, geedka ma uusan badbaadin jiilaalka. Осенью процесс практически обратный. Dhulka inta lagu guda jiro beerashada waa mid aad u diiran, laakiin casiirada muhiimka ah ayaa horay hoos u dhacayay, ma ahan lagama maarmaan in xooga la saaro dayactirka iyo horumarka qaybta kor ku xusan, haddana wali waxaa jira wakhti si loo hagaajiyo xididdada carrada ka hor jiilaalka. Dhirta noocan oo kale ah waxay si fiican u maamushaa xoojinta iyo qaadashada xididka, iyo gu'ga, bilowga xilliga daaqsinka, waxay ku farxi doontaa in ay horay u soo mariso tamarta hore u soo ururisay "quruxda dibadda".
Waa muhiim! Doorashada dayrta, waxaad ugu yaraan ku guuleysan kartaa sanadka oo dhan, sababtoo ah guga soo socda waxaad yeelan doontaa abuur ah si buuxda loo beeray, halka geedka beerto sanadkiiba, geedku wuxuu kaliya bilaabi doonaa inuu ka soo kabsado jiilaalka kowaad ee adag. Xaaladda ugu xumayd, marka la beero guga, khatarta dhalmada ee aad u deganayd ee aan ku soconin jiilaalka dhan.
Intaa waxaa dheer, geedka in la beeray xilliga dayrta si tartiib ah iyo si nidaamsan u baxo inta lagu jiro xilliga qaboobaha qabow. Waqtigaan, isaga kuma dhibo cudur ama cayayaanka, maaddaama muddada ay noloshooda firfircooni hore u dhameeyeen. Guga, geedka tufaaxa ah ee ka badbaaday diiqada xubinta taranka ayaa si dhakhso ah uula kulantay dhibaatada iyo dhibaatooyinka buuxa: laga bilaabo daadad guga ama dhaxan dabayaaqada kuleylka aan la ogayn, qalalan, iyo dulinyada la qaboojiyay xilliga jiilaalka.
Qof kastaa wuxuu fahamsan yahay in geed geedo ay ku bilaabmeen god, laakiin dadka yaryar ayaa og in ceelkaasi u baahan yahay in la diyaariyo horey iyo si taxaddar leh.
Waa muhiim! Nadiifiye wanaagsan ayaa bilaabay inuu "qalab" u sameeyo geed godka mustaqbalka muddo lix bilood ah, ama xitaa sannad ka hor beerashada, seedling.
Si uu geedku u bilaabo inuu si wanaagsan u bilaabo horumarinta mustaqbalka, ciidda waa in si fiican loo nadiifiyaa oo u buuxsamaa dhammaan nafaqooyinka ay dhirta mustaqbalka u baahan tahay. Quudinta xiga, dabcan, waa muhiim, laakiin aasaasiga ah ee 2 sano ee ugu horreeya ee nolosha geedka ayaa la sameeyaa inta lagu jiro diyaarinta godadka beerta.
Haddii aad go'aansato inaad ku beeri geedka tufaaxa xilliga dayrta, jaan gooyaan ugu yaraan hal bil iyo badh, haddii guga, waa in la sameeyo maalin ka hor xilliga dayrta. Laakiin marka ay timaado dhul bikrad ah, diyaarinta dhulka beerta waa inay bilaabataa ugu yaraan hal sano.
Cabbirada hindhisyada laftooda waa in aysan aheyn mid ka weyn taayada dhoobada ama nidaamka xididka ee seedling. Si kastaba ha noqotee, daloolkaasi waa la qodi karaa oo kaliya haddii aad hubto bacriminta dhulka ee ku yaala dhismahaaga. Fikrad ahaan, waxaa weli ku habboon qodaya carrada 1 cu. m, si loo buuxiyo mugga ee isku darka ciidda la diyaariyey. Marka la diyaarinayo godadka, waxaa lagama maarmaan ah in loo kala qaybiyo dhulka laga soo saaro laba qaybood: lakabka sare ee kore ee si gooni gooni ah, lakabka lakabka hoose ee hooseeya si gaar ah. Isku day in aad cidhifyada godka ku hayso sida ugu macquulsan. 30-40 mitir ee ugu dambeeyey ee dhulka laguma soocay godka, laakiin si fiican u qoday si fiican. Iyada oo joogitaanka biyaha sare ee hoose ee godka waa in la dhigo lakabka drainage.
Hadda diyaariya isku darka nafaqada. Saldhigeedu waa humus ama compost, qiyaastii 20-30 litir, iyo sidoo kale 30-40 litir oo peat ah (peat). Qodobadan, ku dar 500 g of superphosphate, 1,5 kg oo dhagax fosfate ah (kaliya 1 kg of superphosphate waa la qaadan karaa), iyo sidoo kale 1 kg ash ashya ah (bacriminta potash this organic lagu beddeli karo macdanta, doorbidaa ma ku jiraan chlorine, tusaale ahaan, potassium sulfate ee 150 g ama potassium cusbada isla lacagta).
Waa muhiim! Bacriminta Nitrogan iyo lime waa in aan lagu daboolin ciidda, waxay ku adkeyn doonaan in ay yaryar si ay u noolaadaan. Waxa kale oo aan suurtagal ahayn in la isticmaalo digada ujeedooyinkaas, tan iyo uumiga waa sun ku ah xididdada sapling ah.
Qaado walxaha diyaarsan ee godadka si aad u buuxisid sheyga. Marka la isku daro isku dhafka, waxaa kaliya oo aan u baahanahay in aan diyaarino daloolka mugga loo baahan yahay (xaddiga nidaamka xididka geedka tufaaxa dhalinyarada).
Hadda waxaad u tegi kartaa sapling. Waxaan hore u sheegnay sida loo ilaaliyo geedka oo aan qallajinayno xididada, laakiin haddii ay dhacdo, hoos u dhig qaybta xididka geedka ilaa 24 saacadood ka hor inta aan la beeri. Si taxadar leh u dhig jeexitaanka qotada diyaargarawga si qoorta xididku aanu u dhaafin 8-10 cm oo qoto dheer oo ciidda ah, waxaan ka buuxinaa ceelka ciidda bacrin ah, ka qoday hore, waxaan si fiican u xakameynaa oo u daadi si aad u badan.
Sidii horey loo soo sheegey, waxaad u baahan tahay inaad daryeelto geed tufaax ah oo qurux badan si la mid ah miro. Nidaamka ugu muhiimsan waa waraabinta, dhirta, mulching, la dagaallanka cudurrada iyo cayayaanka, qaabaynta, iyo sidoo kale diyaarinta habboon jiilaalka.
"Ola", sida hore loogu soo sheegey, wuxuu jecel yahay carrada qoyan, laakiin ma u dulqaadanayo biyaha taagan. Sida caadiga ah, laga bilaabo guga soo socda ka dib markii la beero, waa ku filan inaad biyo u waraabiso 3 jeer xilli ciyaareedka: guga hore (guga qoyaanka ciidda waa ku filan tahay geedka tufaaxa), inta lagu guda jiro bilowga fruiting iyo xilliga dayrta, si aad u qoyso ciidda ka hor jiilaalka, sidaas dhulka ayaa hoos u yar. Waraabinta waa in lagu sameeyaa wareegga wareegga wareegga maskaxda (iyo geed qaangaar ah - oo ku wareegsan wareegga taajka), adigu si toos ah ha ugu shubin biyaha hoosta geedka.
Waa muhiim! Si aan loogu qiyaasin qiyaasta, raac "qaanuunka dahabka": da'da geedka tufaaxa ee sannadaha waxay u dhigantaa hal mar oo biyo ah oo lagu waraabiyo baaldiyada.
Si aan u galin jaridda dhirta iyo dabacsan iyo isla markaa hayso dhammaan qoyaanka ciidda, si looga hortago suurtogalnimada cawska si ay u koraan uguna guuleystaan ​​muuqaal jimicsi oo dheeraad ah, geedaha tufaaxa ah ee dhirta caadi ahaan mulch. Sida daboolka ah, waxaad isticmaali kartaa cirbadaha geedaha, balka, dhoobada, nutsheelyada iyo waxyaabaha kale ee ku haboon ee la heli karo.
Iyadoo beeritaanka habboon ee 2 sano ee ugu horeeya, waxaan horay u bixinnay geedkeenna tufaaxa leh dhammaan Bacriminta lagama maarmaanka ah. Si kastaba ha ahaatee, sanadka ugu horeeya ka dib markii la beero, bacrimiya geedka ma aha mid u qalantaa - kaliya biyo badan oo ka hortag ah korodhka jirridda geed leh haramaha.
Laga bilaabo sanad-labaad ama seddexaad, saddex jeer xilli, geedka tufaaxa u baahan yahay in la quudiyo. Bacriminta dabiiciga ah, potash iyo fosfooraska fosfooraska ayaa lagu dabaqaa xilliga dayrta, isla mar ahaanshaha qashin qubka.
Xilliga gu'ga, ka hor inta ku hari buruska, Bacriminta nitrogen ama arrinta organic ay ku jirto nitrogen (tusaale ahaan, mullein) ayaa lagu dabaqayaa. Marka la dhammeeyo ubax, codsiga foliar (buufinta) ayaa lagu talinayaa Maajo ama horraantii Juun. Tufaaxa qaangaarka ah ee "fruiting" waxaa badanaa la mariyaa marar badan, laakiin qurxinta "Ola" ee noocan oo kale ahi waa mid aad ufiican.
Bacriminta waa in lagu daboolaa qoto dheer oo ah 15 cm geedo yar yar iyo 45 cm geedo waaweyn oo ka weyn saddex sano, wareega goobo leh raadin ah 1.5 m, halkaas oo xarunta waa saldhigga jir.
Cagaarshow, geedaha tufaaxa ee qurxinta waxaa ka mid ah cuduro isku mid ah sida dhirta nooca caadiga ah, gaar ahaan, cadowgooda ugu weyn - qolofta, xayrta, budada madow, cytosporosis, cayayaanka - xayawaanka, qoob-ka-ciyaarka, caleenta, cayayaanka miro, caarada, aboorka tufaaxa .
Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la siiyo iyaga, sababtoo ah kuwan geedaha duurjoogta ah waxay muujinayaan xasilooni weyn oo ay ku sameeyaan duleedyada ugu muhiimsan marka loo eego kuwa ka soo jeeda.
Si kastaba ha ahaatee, si looga hortago guga, xitaa ka hor inta aan la gooyin, waxaa fiican in lagu daaweeyo geed tufaax leh cayayaanka iyo fungicides. Tan iyo maaddooyinka 'Ola' kala duwan ayaa ku habboon raashinka, ma aha mid u qalma in lagu sumo cayayaanka inta lagu jiro ubax iyo fruiting, sidoo kale, waxaa fiican in la siiyo doorbidada alaabta noolaha casri ah, waxay ku dhow yihiin kuwa aan sunta ahayn oo aad wax ku ool ah. Mashiinka labaad ee ka hortagga ah ayaa la sameeyaa xilliga dayrta, ujeedadiisa ugu wayn waa in la burburiyo cayayaanka kuwaas oo degay jiilaalka jilif ama ciidda agagaarka geedka. Nitrafen iyo HOL waxay ku habboon yihiin ujeedadaas.
Dhisida iyo manjooyin waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee daryeelaya geed tufaaxa ah, sababtoo ah muuqaalka geedka iyo sida ay ugu habboon tahay naqshadda boggayaga ayaa ah muhiimada aasaasiga ah ee nagu leh.
Ma taqaanaa? Tufaax waa miro la yaqaan dadka ilaa tan hore. Muddo cayiman oo Yurub ah, waxaa xitaa loo isticmaalay nooc ka mid ah qiyaasta. Gaar ahaan, wax kasta oo ka mida dibadda waxay la yaaban tahay marka la barbardhigo tufaaxa: tusaale ahaan, yaanyo lagu magacaabo "apple gold" (ROMI d'oro "), baradhada - balaayada, tangerines iyo liinta - siday u kala horreeyaan, Shiinaha iyo Hindiya, laakiin tufaaxa.
Waxaa jira siyaabo iyo habab badan oo loogu talagalay sameynta geedaha sida, waxay kuxirantahay waxa aad doorbidayso iyo fikradaha naqshadeeyaha muuqaalka. Qaabka ugu caansan ee sameynta tufaaxa ornamental waa sida soo socota. On geedka yar yar ee guga, manjooyin ku saabsan qiyaastii 10 cm ee caarada ah ee caleemaha ugu weyn ee waa la fuliyaa si ay 6-7 burooyinkoodii ayaa ka sii koreysa asliga ah. At cidhifyada ee seedling, 3-4 laamood oo waaweyn oo qalfoof ah ayaa la doortaa, sii kordhaya ee jihooyinka kala duwan, haddii ay suurtogal tahay, si siman. Laamahani waa la gooyay isla heerka, iyo dhammaan caleemaha kale "tartame" ayaa laga saaray. Fikrad ahaan, waaxda ugu muhiimsan ee toosan waa inay ahaadaan dhinaca sare, dhinacna - sida ugu fog ee suurtagal ah.
Sannad kasta oo kabadan, manjooyin noocaan oo kale ah ayaa soo noqnoqonaya, kaliya ilaa 3 laamood ee hore ee qalfoofka ah ayaa lagu daraa, 2-3 caleemaha qalafsan oo adag oo cusub, ayaa loo doortaa hab sida geedku aanu u joogin hal dhinac. Laamaha liito waa la saaraa, la soo doortay si siman.
Iyada oo la gooyo noocaas ah, geedka tufaaxu wuxuu ku kori doonaa taaj saran oo mar walba leh muuqaal wanaagsan oo muuqaal fiican leh.
Waxaan hore ugu soo sheegnay Ola waa noocyo kala duwan oo jiilaal-adag ah. Si kastaba ha ahaatee, waa in maskaxda lagu hayaa in cimilada caalamku ay isbeddelayso, iyo, taas oo si gaar ah u xun, ee aan la saadaalin Karin. Sidaa darteed, xitaa gobollada leh shanaad iyo sare ee jiilaalka-adkaysiga, ma naga horjoogsanayso inaan ka walwalno diyaarinta xilliga qaboobaha ee geedaha tufaaxa ee nooca ah, gaar ahaan kuwa yaryar.
Xaqiiqdu waxay tahay tan in kuwan, illaa dhowaan loo tixgeliyo diirimaad, gobollada sannadihii ugu dambeeyay, heerkulka qaboobaha waa mid deg deg ah, halka saacadaha iftiinka maalin laha ah uusan weli badalin. Waa saamiga dhererka saacadaha iftiinka iyo heerkulka ugu hooseeya ee go'aamiya aagga difaaca barafka: isagoo diyaarinaya jiilaalka iyada oo la raacayo dhererka maalinta "kufilan" cimilada, dhirta si lama filaan ah ayay u aragtaa xaaladaha heer-kulul aan caadi ahayn oo xaaladdan oo kale ay u dhiman karto.
Xaalad kale oo loogu talagalay jiilaalka sahlan ee geedku waa joogitaanka xaddiga badan ee barafka. Waa baraf, ma baraf. Iyo tan, heerkul aan joogto ahayn xilliga jiilaalka sidoo kale waxay tufaax siineysaa adeeg xun. Duufaan xoog leh oo lama filaan ah, barafka hore ayaa bilaabay inuu dhalo, kadibna qaboojiyo, daboolaya ciidda agagaarka godka leh qolof baraf ah oo aan u oggolaanin ogsijiinka inuu dhex maro. Xaalad aad u sarreysa, xitaa heerkul aan aad u hooseeyo waxay noqon kartaa mid aad u adag geed si ay u noolaadaan. Taas oo ka soo baxaysa, geed geed tufaax ah, illaa ay ugu dambeyntii qaan gaadhin, waxaa si xoog leh lagula talinayaa in ay daboosho jiilaalka xitaa kahor intaan cimilada qaboobta dhabta ah iman. Ujeedooyinkaas, wax kasta oo loo isticmaalo mulching waa ku habboon - sida balka, cirbadaha, caws engegan, caleemo qalajiyey, peat.
Si looga ilaaliyo jirridda ka imanaysa naxdinta iyo ilkaha yaryar, waxaa habboon in lagu duubo weelka ama agrofiber gaar ah, iyadoo laga fogaanayo isticmaalka alaabta madow, haddii kale xilliga kulaylka ama qorraxda tooska ah ee jilifku wuxuu bilaabi doonaa inuu jebiyo oo xitaa bilaabo inuu dhirbaaxo.
Ha caajisin si aad u qaaddo tallaabooyinka kahortaga ah ee sahlan - oo geedkaaga yar wuxuu ku filnaan doonaa xitaa jiilaal aan caadi aheyn oo aan caadi ahayn.
Si aad uisid geed Ole ah oo lagu qurxiyo geedahaaga si aad u hubiso niyaddaada naftaada sanado badan. Haddii uu qof doonayo inuu arko xaasidnimada indhaha deriska - wuu u heli doonaa. Si kastaba ha ahaatee, marka lagu daro quruxda, geedkan furfuran ee furan wuxuu kordhin doonaa dhalidda dhirta kale ee beertaada, soo jiidashada beeska leh carafka aan fiicnayn iyo quruxda ubaxa casaanka ah ee ballaaran, dhammaadka xagaaga waxay ku raaxeysan doonaan goosashada badan ee tufaaxa Jannada, taas oo aad karin kareyso macaanka cajiinka ah ee jiilaalka, iyaga oo karkarinaya.